ကလေးများနှင့် အဖျားကြီးပြီးတက်ခြင်း | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
“ ဆရာမရေ လုပ်ပါဦး ... ကလေးအဖျားကြီးပြီး တက်သွားလို့ဆိုတဲ့ မေမေ၊ ဖေဖေတို့ရဲ့ ကြောက်လန့်တကြား စကားသံတွေကို ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းတွေမှာ ကြားရတာမနည်းပါဘူး။
အဖျားကြီးပြီး တက်တယ်ဆိုတာ အသက် ၆ လကနေ ၅ နှစ်အတွင်း ကလေးအယောက် ၁၀၀ မှာ ၃၊ ၄ယောက် လောက်တော့ ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ များသောအားဖြင့်တော့ ၁၂ လကနေ ၁၈ လအတွင်း အဖြစ်များပါတယ်။
>> အဖျားကြီးပြီး တက်တဲ့အခါ ဘာလုပ်သင့်သလဲ?
ကလေးမှာ အဖျားကြီးပြီး တက်တဲ့အခါ အဓိကက ထိခိုက်ဒဏ်ရာမရအောင် ကာကွယ်ဖို့ပါပဲ။
● မာတဲ့ အရာဝတ္ထုတွေ၊ ချွန်ထက်တဲ့ အရာဝတ္ထုတွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
● တံတွေးတွေ၊ အန်ဖတ်တွေ ပါးစပ်ထဲကနေ အပြင်ကို ထွက်နိုင်အောင် ခေါင်းကို ဘေးဘက်စောင်းထားပါ။
● ပါးစပ်ထဲ ဘာမှမထည့်ပါနဲ့။
● ကလေးဆရာဝန်နဲ့ ဆက်သွယ်ပါ။
● ၅ မိနစ်ကြာတဲ့အထိ အတက်မကျသေးရင် ချက်ချင်း ကလေးဆေးရုံသွားပါ။
>> ကလေးမှာ ထပ်ပြီးတက်နိုင်သေးလား?
အဖျားကြီးပြီး တက်တာဟာ မျိုးရိုးလိုက်တတ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ကြိမ် အဖျားကြီးပြီး တက်/မတက်ဆိုတာက ကလေးအသက်ပေါ် မူတည်ပါသေးတယ်။ အသက် ၁ နှစ်အောက် ကလေးတွေမှာ ပထမဆုံး အဖျားကြီးပြီး တက်တဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ဟာ နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်တက်ဖို့ ၅၀ ရာနှုန်း အခွင့်အလမ်း ရှိပါတယ်။ အသက် ၁ နှစ်ကျော်မှ တက်တဲ့ကလေးတွေမှာတော့ နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်ဖြစ်ဖို့ အခွင့်အလမ်း ၃၀ ရာနှုန်းလောက်သာ ရှိပါတော့တယ်။
>> အဖျားကြီးပြီး တက်တာဟာ အန္တရာယ်များပါသလား?
အဖျားကြီးပြီး တက်တာဟာ ကြောက်ဖို့ကောင်းသော်ငြား ကလေးအတွက် အန္တရာယ်တော့မရှိပါဘူး။ အဖျားကြီးပြီး တက်တာဟာ ဦးနှောက်ကို ထိခိုက်စေတာ၊ အာရုံကြောထိတာ၊ တစ်ခြမ်းသေတာ၊ ဉာဏ်ရည်မမီတာ၊ အသက်အန္တရာယ်ရှိတာမျိုးတွေ မဖြစ်စေနိုင်ပါဘူး။
>> အဖျားကြီးပြီး တက်တာကို ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲ?
ကလေးမှာ အဖျားကြီးပြီးတက်ပြီဆိုရင် ကလေးဆရာဝန်နဲ့ သွားပြပါ။ ဘာကြောင့် ဖျားသလဲဆိုတာကိုကြည့်ဖို့ စမ်းသပ်မှုတွေ လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ တက်တာကို ကုဖို့ထက် ဖျားတာကိုကုဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ ကလေးအသက် ၁ နှစ်အောက်ဆိုရင် ဦးနှောက်အမြှေးရောင်တာတို့လိုမျိုး အရေးကြီးတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေ ရှိ/မရှိ ရှာဖို့ ခါးဆစ်ရိုး ဖောက်ရပါမယ်။
ယေဘုယျအားဖြင့်တော့ ရိုးရိုးအဖျားကြီးပြီး တက်တာတွေအတွက်တော့ အတက်ကျဆေးတွေ ပေးစရာမလိုပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဖို့ လိုပါတယ်။ တက်တာ တာရှည်နေတယ်၊ မကြာမကြာ တက်တယ်ဆိုရင်တော့ တစ်မျိုးတစ်ဖုံ ပြောင်းလဲနိုင်သေးတယ်ပေါ့။
ကလေးမှာ အဖျားကြီးပြီး တက်တတ်တဲ့ရောဂါ ရှိတယ်ဆိုရင် အဆိုးဆုံးကို တွေးမပူပါနဲ့။ ဒီလိုအတက်ရောဂါမျိုးဟာ ကလေးအတွက် အန္တရာယ်မဖြစ်စေနိုင်သလို ရေရှည်ကျန်းမာရေးလည်း မထိခိုက်စေနိုင်ပါဘူး။ သေသေချာချာ သိဖို့အတွက် ကလေးဆရာဝန်နဲ့ သေချာဆွေးနွေး တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
“ ဆရာမေရ လုပ္ပါဦး ... ကေလးအဖ်ားႀကီးၿပီး တက္သြားလို႔ဆိုတဲ့ ေမေမ၊ ေဖေဖတို႔ရဲ႕ ေၾကာက္လန႔္တၾကား စကားသံေတြကို ေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းေတြမွာ ၾကားရတာမနည္းပါဘူး။
အဖ်ားႀကီးၿပီး တက္တယ္ဆိုတာ အသက္ ၆ လကေန ၅ ႏွစ္အတြင္း ကေလးအေယာက္ ၁၀၀ မွာ ၃၊ ၄ေယာက္ ေလာက္ေတာ့ ျဖစ္ေလ့ရွိပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ေတာ့ ၁၂ လကေန ၁၈ လအတြင္း အျဖစ္မ်ားပါတယ္။
>> အဖ်ားႀကီးၿပီး တက္တဲ့အခါ ဘာလုပ္သင့္သလဲ?
ကေလးမွာ အဖ်ားႀကီးၿပီး တက္တဲ့အခါ အဓိကက ထိခိုက္ဒဏ္ရာမရေအာင္ ကာကြယ္ဖို႔ပါပဲ။
● မာတဲ့ အရာဝတၳဳေတြ၊ ခြၽန္ထက္တဲ့ အရာဝတၳဳေတြနဲ႔ ေဝးရာမွာထားပါ။
● တံေတြးေတြ၊ အန္ဖတ္ေတြ ပါးစပ္ထဲကေန အျပင္ကို ထြက္ႏိုင္ေအာင္ ေခါင္းကို ေဘးဘက္ေစာင္းထားပါ။
● ပါးစပ္ထဲ ဘာမွမထည့္ပါနဲ႔။
● ကေလးဆရာဝန္နဲ႔ ဆက္သြယ္ပါ။
● ၅ မိနစ္ၾကာတဲ့အထိ အတက္မက်ေသးရင္ ခ်က္ခ်င္း ကေလးေဆး႐ုံသြားပါ။
>> ကေလးမွာ ထပ္ၿပီးတက္ႏိုင္ေသးလား?
အဖ်ားႀကီးၿပီး တက္တာဟာ မ်ိဳး႐ိုးလိုက္တတ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ အဖ်ားႀကီးၿပီး တက္/မတက္ဆိုတာက ကေလးအသက္ေပၚ မူတည္ပါေသးတယ္။ အသက္ ၁ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးေတြမွာ ပထမဆုံး အဖ်ားႀကီးၿပီး တက္တဲ့ ကေလးတစ္ေယာက္ဟာ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပန္တက္ဖို႔ ၅၀ ရာႏႈန္း အခြင့္အလမ္း ရွိပါတယ္။ အသက္ ၁ ႏွစ္ေက်ာ္မွ တက္တဲ့ကေလးေတြမွာေတာ့ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္ျဖစ္ဖို႔ အခြင့္အလမ္း ၃၀ ရာႏႈန္းေလာက္သာ ရွိပါေတာ့တယ္။
>> အဖ်ားႀကီးၿပီး တက္တာဟာ အႏၲရာယ္မ်ားပါသလား?
အဖ်ားႀကီးၿပီး တက္တာဟာ ေၾကာက္ဖို႔ေကာင္းေသာ္ျငား ကေလးအတြက္ အႏၲရာယ္ေတာ့မရွိပါဘူး။ အဖ်ားႀကီးၿပီး တက္တာဟာ ဦးေႏွာက္ကို ထိခိုက္ေစတာ၊ အာ႐ုံေၾကာထိတာ၊ တစ္ျခမ္းေသတာ၊ ဉာဏ္ရည္မမီတာ၊ အသက္အႏၲရာယ္ရွိတာမ်ိဳးေတြ မျဖစ္ေစႏိုင္ပါဘူး။
>> အဖ်ားႀကီးၿပီး တက္တာကို ဘယ္လိုကာကြယ္ၾကမလဲ?
ကေလးမွာ အဖ်ားႀကီးၿပီးတက္ၿပီဆိုရင္ ကေလးဆရာဝန္နဲ႔ သြားျပပါ။ ဘာေၾကာင့္ ဖ်ားသလဲဆိုတာကိုၾကည့္ဖို႔ စမ္းသပ္မႈေတြ လုပ္ပါလိမ့္မယ္။ တက္တာကို ကုဖို႔ထက္ ဖ်ားတာကိုကုဖို႔က အေရးႀကီးပါတယ္။ ကေလးအသက္ ၁ ႏွစ္ေအာက္ဆိုရင္ ဦးေႏွာက္အေျမႇးေရာင္တာတို႔လိုမ်ိဳး အေရးႀကီးတဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြ ရွိ/မရွိ ရွာဖို႔ ခါးဆစ္႐ိုး ေဖာက္ရပါမယ္။
ေယဘုယ်အားျဖင့္ေတာ့ ႐ိုး႐ိုးအဖ်ားႀကီးၿပီး တက္တာေတြအတြက္ေတာ့ အတက္က်ေဆးေတြ ေပးစရာမလိုပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဆရာဝန္နဲ႔ တိုင္ပင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ တက္တာ တာရွည္ေနတယ္၊ မၾကာမၾကာ တက္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ တစ္မ်ိဳးတစ္ဖုံ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသးတယ္ေပါ့။
ကေလးမွာ အဖ်ားႀကီးၿပီး တက္တတ္တဲ့ေရာဂါ ရွိတယ္ဆိုရင္ အဆိုးဆုံးကို ေတြးမပူပါနဲ႔။ ဒီလိုအတက္ေရာဂါမ်ိဳးဟာ ကေလးအတြက္ အႏၲရာယ္မျဖစ္ေစႏိုင္သလို ေရရွည္က်န္းမာေရးလည္း မထိခိုက္ေစႏိုင္ပါဘူး။ ေသေသခ်ာခ်ာ သိဖို႔အတြက္ ကေလးဆရာဝန္နဲ႔ ေသခ်ာေဆြးေႏြး တိုင္ပင္သင့္ပါတယ္။
၉.၇.၂ဝ၂ဝ | ကလေးများနှင့်ကျန်းမာရေး
ကလေးကို ချိုးပေးမယ့်ရေဟာ မပူဘဲ နွေးနွေးလေး ဖြစ်နေရပါမယ်။ အပူချိန် 32° ဆဲလ်စီးယပ်စ်ဟာ ကလေးရေချိုးဖို့ အကောင်းဆုံးအပူချိန် ဖြစ်ပါတယ်။
2. တစ်ပတ် ဘယ်နှစ်ရက် ချိုးကြမလဲ?
တစ်ပတ် ဘယ်နှစ်ကြိမ်လောက် ရေချိုးပေးရမလဲ ဆိုတာကတော့ ကလေးတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မတူတတ်ပါဘူး။ ပုံမှန...
၅.၇.၂ဝ၂ဝ | ကလေးများနှင့်ကျန်းမာရေး
သွေးလွန်တုပ်ကွေးဟာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရောဂါဖြစ်လို့ ပိုးကိုသတ်နိုင်တဲ့ဆေး မပေါ်သေးပါဘူး။ ရောဂါပိုပြီးမဆိုးအောင်၊ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ လက္ခဏာတွေကိုပဲ သက်သာအောင် ကုသနိုင်ပါတယ်။ သွေးလွန်တုပ်ကွေးဟာ ရာသီတုပ်ကွေးနဲ့လည်း ဆင်ဆင်တူတာမို့ မိဘတွေအနေနဲ့ သတိထားရမယ့် လက္ခဏာတွေကို သိထားရပါမယ်။သ...